Ungazi kanjani ukuthi ngabe ingane yonakele | Bezzia
Ungasho kanjani ukuthi ingane yonakele
UMaria Jose Roldan | 12/03/2021 22:00 | Fundisa izingane
Akekho umzali othanda ukuvuma ukuthi ingane yakhe yonakele futhi ayitholi imfundo efanele. Kodwa-ke, lolu hlobo lokuziphatha luvame kakhulu kunokuba ungacabanga futhi lusemini.
Kubalulekile-ke ukuthi ukwazi ukubhekana nale nkinga ngesikhathi ngoba kungenjalo bangalimala uma sekufika ebudaleni. Abazali kumele babe namathuluzi adingekayo ukulungisa le ndlela yokuziphatha eyingozi ezinganeni futhi bavimbele izingane zabo ukuba zonakaliswe.
1 Ungasho kanjani ukuthi ingane yonakele
2 Ungayilungisa kanjani indlela yokuziphatha kwengane eyonakele
Kunezimpawu eziningi ezikhombisa ukuthi ingane yonakele nokuthi ukusebenza kwayo akulungile:
Ukuze ingane ithukuthele ngakho konke futhi ibe nokuhlushwa kuyinto ejwayelekile kuze kube yiminyaka emithathu noma emi-3 ubudala. Uma ngemuva kwaleyo minyaka, ingane iqhubeka nokuba nolaka, kungakhombisa ukuthi ingane eyonakele. Eminyakeni enjalo, ukuthukuthela nolaka kusetshenziselwa ukuxhaphaza abazali futhi bathole abakufunayo.
Ingane eyonakele ayikwazisi lokho enakho futhi inezinhloso zazo ngaso sonke isikhathi. Akukho lutho olumgcwalisayo noma olumenelisayo futhi akakwazi ukuphendula cha.
Ukushoda kwemfundo namagugu kungenye yezimpawu ezicacile zokuthi ingane yonakele. Ukhuluma nabanye ngendlela engenanhlonipho ngokuphelele nangendelelo ephelele.
Uma ingane yonakele, kuyinto ejwayelekile ukuthi ingalaleli noma yiluphi uhlobo lwe-oda kubazali. Akakwazi ukwamukela imithetho ebekwe ekhaya futhi enze akufunayo.
Ungayilungisa kanjani indlela yokuziphatha kwengane eyonakele
Into yokuqala abazali okufanele bayenze ukwamukela ukuthi ingane yabo yonakale nokuthi imfundo etholakele ibinganele. Ukusuka lapha kubalulekile ukulungisa lokho kuziphatha futhi ulandele uchungechunge lweziqondiso ezisiza ingane ukuthi ibe nokuziphatha okufanele:
Kubalulekile ukuma uqinile lapho ubhekene nezinkambiso ezibekiwe futhi ungayinikeli ingane.
Omncane kumele abe nochungechunge lwezibopho okufanele zifezeke. Abazali abakwazi ukumsiza futhi omncane unecala lokuthi lowo azifeze.
Ukuxoxisana nokukhulumisana okuhle kuyisihluthulelo sokubonisa inhlonipho kubantu abadala. Inkinga izingane namuhla ezinayo ukuthi azikhulumi neze kubazali bazo, ukudala ukuziphatha okungafanele.
Abazali kufanele babe yisibonelo ezinganeni zabo futhi babe nokuziphatha okufanele phambi kwabo.
Kuhle ukuhalalisela ingane uma yenza okuthile kahle nokuthi kulungile. Ukuqinisa imikhuba enjalo kuzosiza ingane ukuthi ikwazi ukuhlonipha izinkambiso ezahlukahlukene ezisungulwe ngabazali.
Ngamafuphi, Ukufundisa ingane akuyona into elula noma elula futhi kudinga isikhathi nokubekezela okuningi. Ekuqaleni kungaba nzima enganeni ukuqonda imikhuba enjalo kepha izogcina ifunde ngokuqinile uchungechunge lwamagugu oluzomsiza ukuthi enze isimilo sakhe sibe esikahle futhi esifanele kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Fundisa izingane » Ungasho kanjani ukuthi ingane yonakele
Izincwadi ezi-5 zokuphila okusimeme okufanele uzifunde
Lokhu kudla kuthinta ukujikeleza kwegazi lakho